SAINSBURY ၏အလုပ်သမားများကသူတို့၏ယူနီဖောင်းသည် BEYONCE ၏ IVY PARK အသစ်နှင့်ဆင်တူသည်ဟုဆိုကြသည် - သတင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ရဲ့ပထမသုံးပတ်အတွင်းမှာပဲတစ်နှစ်လုံးလုံးလုံလောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်ခဲ့မိရင်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Twitter ဟာခေတ်အဆက်ဆက်လူအများစုရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဤသည် Sainsbury ၏ပရိသတ်များနှင့် Beyonce ၏ပရိသတ်များအကြားတစ် ဦး အငြင်းအခုံဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်။
ဤအရာအားလုံး Ivy Park အသစ်ထွက်ပေါ်လာသည်။ အတော်များများက Sainsbury ရဲ့အောက်က tweet post များအတွက်အဘို့အ plucky လူမှုရေးမီဒီယာ admin ရဲ့ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, ၎င်း၏လိမ္မော်ရောင်နှင့် Burgundy အရောင်အစီအစဉ်ကို Sainsbury ရဲ့ယူနီဖောင်း၏နှိုင်းယှဉ်။ ၎င်းသည် Repping ကို ၁၈၆၉ မှစ၍ စာတန်းထိုးထားပြီး #SainsBey နှင့် hashtag ဖြစ်သည်။
ဘယ် oc ဇာတ်ကောင်ပဲ
၁၈၆၉ ခုနှစ်ကစပြီးပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းလား။ #sainsburys pic.twitter.com/a5VwkKnu5A
- Sainsbury's (@sainsburys) ဇန်နဝါရီလ 17, 2020
Beyonce X ကို Sainsburys pic.twitter.com/IaCbGWcIVk
- Caitlin Robinson (@ Caitlin86682767) ဇန်နဝါရီလ 17, 2020
လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမြည်းစမ်း။ မတူကွဲပြားသောမြက်ပင်အရသာပူပြင်းသည့်အသုံးအနှုန်းကိုပင်မပြောမီတွစ်တာတွင်ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။ ဤအငြင်းအခုံသည်မတူကွဲပြားသောအုပ်စုများနှင့်လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးမှတုံ့ပြန်မှုများစွာကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ အချို့မှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဖြစ်မကြာမီ Sainsbury ရဲ့သူတို့ရဲ့ post ကိုဖြန့်ချိအဖြစ်, လူတွေစူပါမားကတ်မှာ Beyonce ၏မိုက်မဲတည်းဖြတ်မှုများအောင်နှင့်သူမ၏သီချင်းစာသား rewording ခဲ့ကြသည်:
အတန်း ၂၄ မှာသန့်ရှင်း pic.twitter.com/8xmVTGGxVg
- harvey (@harveymurrayy) ဇန်နဝါရီလ 18, 2020
ကိုယ့်ရည်းစားကိုကြည့် porn ကိုမုန်း
Tills on Beyonce: ဘယ်၊ ဘယ်၊ သင်ဘယ်ဘက်ကိုအိတ်ထဲစကင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
- Shuj ☆ (@ S11UJ) ဇန်နဝါရီလ 18, 2020
ပြင်းထန်သော Beyonce ပရိသတ်များ
အိုကေ, ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူတွေဟာတကယ်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြစ်မှုကျူးလွန်တာကိုတွစ်တာမှာကြည်နူးစွာရယ်မောနေကြတာကိုသိခဲ့ရတယ်၊ တကယ်တော့ငါတို့ဟာအမြဲတမ်းသိခဲ့တာပါ။ အထူးသဖြင့် Beyonce fandom (သို့) Beyhive နှင့်မခေါ်သင့်သည်ကိုသူတို့ခေါ်လိုသည့်အချိန်ကတည်းကသင်မနမ်းပါနှင့်။ ဖျားနာ
၁၈၆၉ ခုနှစ်ကတည်းကဘီယွန်းစေးသည်တစ်နှစ်မပြည့်မီပိုမိုကောင်းမွန်လာခဲ့သည် pic.twitter.com/3Sqss8bXKJ
- Green Chyna (@CORNYASSBITCH) ဇန်နဝါရီလ 17, 2020
- soldoutstadiums | ပန်ကာအကောင့် (@ taeyonce_b7) ဇန်နဝါရီလ 17, 2020
သင်တစ် ဦး အရောင်ပေါင်းစပ် Sweetie ပိုင်ဆိုင်ကြဘူး ???
- သင်သည်တကယ့်သန္တာန် (@thatuhohgirl) ဇန်နဝါရီလ 17, 2020
SAINSBURY'S ၏ tweet တစ်ခုဖြင့်ဤအချက်ကိုအစပျိုးပေးသည်ဆိုပါစို့။
ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဆဲလ်တွေဟာကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကျဆင်းလာတယ်လို့ခံစားခဲ့ရသလိုပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီဆင်ခြေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့သဘောသဘာဝအပေါ်သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့အသံတွေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ တွစ်တာတွင်ယုံကြည်မှုနှင့် ဦး နှောက်စွမ်းရည်တို့ကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရသည်မှာအလျင်အမြန်ပြန်ပေါ်လာသည် -
ငါသူတို့မိဖုရားနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးလျောက်ပတ်ဟာသလုပ်သောကြောင့်, ဗြိတိန်စူပါမားကတ်နှင့်အတူတိုက်ပွဲတွေကောက်နေလိုက်တယ် Beyonce ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးချစ်ကြတယ်။ ငါဆိုလိုတာကစာသားဟာသူတို့ရဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့တူလှပါတယ်။ ?? pic.twitter.com/2Ya7hv7bQY
- လီဆာအယ်လီဆင် (@LisaJaneAllison) ဇန်နဝါရီလ 18, 2020
Beyonce ရဲ့ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ငါ BEGGING ကိုငါဒီ post အောက်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရှက်ရစေဖို့ရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်နက်ရှိုင်းသည်မဟုတ်လော
- သခင်ယေရှုအတွက်အေးအေးဆေးဆေးနေပါ။ (@blixberrie) ဇန်နဝါရီလ 18, 2020
beyonce vs sainsburys ထက်ပိုကျပန်းအမဲသားပေးပါ https://t.co/mAOVny5B5p
- Tobi (@ tobsss97) ဇန်နဝါရီလ 18, 2020
သူမကမှတ်ချက်များအတွက်အများဆုံးတက်ကြွခဲ့ရဲ့အဖြစ်ကမူရင်းကိုဖန်ဆင်းနှင့်တင်ခဲ့သည်ကြောင်းကရင်ခဲ့ယူဆကြပါစို့။ သူမကရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်ဒေါသပြင်းထန်သောမျက်နှာကျက်၌သူမရပ်တည်နိုင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာရင်၏ပရိသတ်များဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသူသည် Beyonce stans များကိုဒေါသတကြီးဖြင့်ထပ်မံဒေါသထွက်စေခဲ့သည်။
မိန်းကလေးတစ် ဦး Boob ထိတွေ့ဖို့ဘယ်လို
ဘယ်သူက Beyonce လိုအပ်တယ်။ Sainsbury ၏မူလနှင့်အကောင်းဆုံး။ ကရင်
ကျနော်တို့သော်လည်းကျော်ကြားလုပ် !! ကရင်
ဤအငြင်းအခုံသည်ဂန္ထဝင်၏ထူးခြားချက်များကိုပြသနိုင်ခြင်းမရှိသကဲ့သို့အပင်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်မူရင်းပို့စ်ကိုရည်ညွှန်းနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာနားလည်မှုရှိကြောင်းပြသရန်မလိုချင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝေမျှသူများသည်သစ်သားထည်မှထွက်လာကြသည်
ငါအဲဒီမှာ 80s အတွက်အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဤသူကားငါ၏အခဲ့သလဲ pic.twitter.com/cNnVRq5AuI
- Tracy သစ်တော်သီး (@TpPears) ဇန်နဝါရီလ 19, 2020
- Benjamin Taylor (@ BenjaminTaylor9) ဇန်နဝါရီလ 19, 2020
ထိုနေ့၏အဆုံးမှာ, ဒီဟာထူးဆန်းတဲ့အငြင်းအခုံကြီးနှင့်သင်ကဒီမိုက်မဲသောအခွအေနေထဲက piss ယူပြီးထက်အခြားမည်သည့်စွမ်းရည်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်ငါပြောသောအရာကိုမသိရ, အိမ်ထဲကထွက်ရ? ဤနေရာတွင်အကြီးဆုံးအနိုင်ရသူမှာ Sainsbury's ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူမ၏အလုပ်ကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်လူသိရှင်ကြားပြုလုပ်ခြင်းတို့အတွက်ကရင်အားကျားကန်ပေးခဲ့သည်။ ရဲ့ကရင်အားလုံးရရှိသွားတဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြပါစို့ ခြားနားချက်ကိုမြည်းစမ်းပါ Pinot Grigios ဒီညနေ - မင်းအဲဒါထိုက်တယ်။
• Rihanna သည်အနောက်မြောက်လန်ဒန်အနောက်ဘက်တွင်နေထိုင်ပြီး Sainsbury's တွင်စျေးဝယ်သည်။ !?
• Aldi ထက်ပိုကောင်းတဲ့စူပါမားကတ်ရှိတယ်ထင်ရင်မင်းမှားတယ်
• ကျွန်ုပ်တို့သည် Colin the Caterpillar ကိုဗြိတိန်နိုင်ငံရှိစူပါမားကတ်များထံမှ ၀ ယ်ယူပြီးဗေဒင်၊ အရသာ၊